Huawei Mate 9, falanqeyn: dib u eegis iyo ra'yi ku saabsan boqorka cusub ee xaraashyada | Androidsis
Huawei Mate 9, kani waa boqorka cusub ee suuqa phablet
Alfonso ee Miraha | | Huawei, Reviews
Qadka Mate wuxuu ku guuleystay inuu kasbado xiisaha xiisaha leh ee adeegsadayaasha kuwaas oo ka mahadcelinaya dhammeystirka tayada, shaashad ballaaran iyo madax-bannaanida cajiibka ah. Horaan kuu siinay dareenkeena ugu horeeya kadib tijaabinta xubinta ugu dambeysay dhacdada soo saaraha, hadda waxaan kuu keenaynaa dhameystiran Huawei Mate 9 dib u eegis, Shaki la'aan, taleefankii ugu fiicnaa ee illaa iyo hadda ay sameeyeen shirkadda weyn ee Aasiya.
Waana markii dhicitaankii Samsung Galaxy Note 7 ay fursad dahabi ah siisay tartamayaasheeda si ay u kordhiyaan saamiga ay ku leeyihiin suuqyada qayb ahaan, kuwa xaraga, oo ay si cad ugu badan yihiin qoyska Samsung Note. Iyo haddii, Huawei Mate 9 wuxuu leeyahay lambarro badan si uu u noqdo boqorka cusub ee gobolka.
1 Huawei Mate 9 wuxuu u taagan yahay inuu soo bandhigo dhammeystir qurux badan oo ku dhex jira naqshad ilaalinaysa DNA-da soo-saaraha
2 Astaamaha farsamada ee Huawei Mate 9
3 Shaashad Full HD ah oo ku ifaysa nalkeeda
4 Akhristaha faraha ugu fiican suuqa
5 EMUI 5.0, oo ah is-dhexgal raaxo iyo iftiin leh oo aan hoos u dhigayn khibradda isticmaale
6 Batariga: Huawei Mate 9 ayaa mar labaad xaaqaysa tartamayaasheeda iyagoo siinaya waxqabad aan horay loo arag iyo ismaamul
7 Kaamiro cadeyneysa laba nidaam waa habka loo maro
8 Gallery sawirro laga qaaday kamaraddii Huawei Mate 9
9 Gabagabadii ugu dambeysay
10 Fikirka Tafatiraha
11 Sawirka muuqaalka ee Huawei Mate 9
Huawei Mate 9 wuxuu u taagan yahay inuu soo bandhigo dhammeystir qurux badan oo ku dhex jira naqshad ilaalinaysa DNA-da soo-saaraha
Waxa ugu horreeya ee aad filayso markaad isticmaaleyso taleefanka 5.9-inji waa in terminal-ka uu yahay mid weyn marka loo eego cabbirka. Oo halkan waxaa imanaysa layaabkii ugu horreeyay ee si fiican loo tijaabiyo Huawei Mate 9. Xubintii ugu dambeysay ee qoyska faseexada ee soo saaraha Aasiya Waxay leedahay cabirro aad u kooban.
Iyada oo lagu cabiray X x 156,9 78,9 7.9 mm Waxaan dhihi karaa in Huawei Mate 9 uu runtii yahay mid sahlan oo raaxo leh oo la isticmaali karo iyadoo loo eegayo shaashadda shaashadeeda. Telefoonku runtii wuxuu ku fiicanyahay gacanta, Bixinta xajin wanaagsan inkasta oo birta la dhameeyay iyada oo ay ku dhisan tahay oo ay 190 garaam oo miisaan ah ka dhig terminalka mid aad u fudud inkasta oo aad leedahay guddi 5.9-inji ah.
Wax badan oo ka mid ah mudnaanta cabbirkeedu wuxuu tagayaa xagga hore ee taleefanka, runtii si fiican ayaa loo isticmaalay. Looxyada dhinaca ayaa si dhib yar looga arki karaa xagga hore, gaar ahaan qaabka Mocha Brown. Intaas waxaa sii dheer, soo-saaruhu wuxuu isticmaalaa qaab madow oo khafiif ah oo hal milimitir ah oo ku wareegsan shaashadda oo dhan isagoo siinaya dareen weyn isticmaalka hore. In kasta oo ay jiraan isticmaaleyaal aan aad u jeclayn qaab-dhismeedkan, haddana shaqsiyan waxba kama qabo. Dabcan, qaabkii aan adeegsaday, oo xagga hore ku cad, saamaynta ayaa ka sii cajiiba.
Labada loox ee kore iyo ka hoose labaduba si baaxad leh uma weyna. Qaybta kore waa meesha dhowr dareemayaal ay ku yaalliin ka sokow kamaradda hore, halka qaybta hoose aan ka heli doonno astaanta astaanta. Iyo badhannada awoodda leh? Huawei wuxuu sii wadaa inuu sharad ku dhigo badhannada shaashadda, fikrad aad u guuleysatay feker ahaanteyda.
Dhinaca bidix waxaan ka helaynaa booska la gelinayo laba kaararka nanoSIM, ama kaarka nanoSIM iyo kaarka micro SD ee kuu oggolaanaya inaad ballaadhiso awoodda koontada. Nidaam sii kordheysa oo la isticmaalay oo noqday halbeegga loogu talagalay Huawei. Xul caqli leh.
U dhaqaaqida dhanka bidix, waa halka ay ku yaalliin furayaasha xakamaynta mugga marka lagu daro badhanka korontada ee Huawei Mate 9. Labada badhan waxay bixiyaan taabasho aad u wanaagsan, oo leh cufnaanta astaamaha ee badhanka awoodda si looga sooco furayaasha xakamaynta mugga, marka lagu daro haysashada istaroog dhammaystiran iyo in ka badan caabbinta cadaadiska ku filan. Shakhsiyan, waxaan u bartay inaan haysto dhamaan sedexda badhan oo isku dhinac ah, marka wax dhib ah kuma lihi arintaan, way fududahay in si walba loola qabsado.
Si ka duwan Huawei P9, shaashadda cusub ee soo-saaraha ayaa leh qalabka dhegaha ee dusha sare, marka lagu daro deked infrared ah oo noo oggolaan doonta inaan ka xakameyno aalado kala duwan taleefanka. Sida hoose, waxaan arki doonnaa laba waji oo loogu talagalay soosaarka afhayeenka iyo isku xiraha USB C.
Dhabarka Huawei Mate 9 wuxuu bixiyaa naqshad aad u soo jiidasho leh oo cajiib leh joogitaanka laba kamaradood oo leh laba midab oo midabkeedu yahay LED flash iyo dareeraha faraha, oo lagu daray magaca calaamadda hoose.
Un taleefan fiican oo ilaaliya khadadka naqshadeynta ee lagu arkay moodooyinka hore taasna way muuqataa marka la barbardhigo tartamayaasheeda iyada oo ay ugu mahadcelineyso qaybta dambe ee leh qaabeynta laba-geesoodka ah ee kamaradaha taas oo, sida aad gadaal ka arki doonto, ay bixiso waxqabad aan caadi ahayn
Miyaan ku heli karaa laakiin? haa xaqiiqda ah in Huawei Mate 9 uma adkaysato boodhka iyo biyaha. Waxaan u maleynayaa in waxa kaliya ee ka maqan boosteejooyinka soo saaraha Aasiya ay tahay shahaado u dhiganta IP-ga oo kuu oggolaaneysa inaad quusto taleefankaaga cajiibka ah dhibaatooyinka. Waxaan rajeyneynaa in jiilka soo socdaa ay leeyihiin ilaalintaan.
Astaamaha farsamada ee Huawei Mate 9
Tusaale Mate 9
Nidaamka hawlgalka Android 7 Nougat hoostiisa lakabka EMUI 5.0
Screen 5'9 "IPS oo leh teknolojiyadda 2.5D iyo xallinta HD HD 1920 x 1080 oo gaareysa 373 dpi
Gacaliye HiSilicon Kirin 960 sideed-xuddun (afar Cortex-A 73 xuduntiisu 2.4 GHz iyo afar xuddood oo Cortex-A53 ah 1.8 GHz)
Kaydinta gudaha 64 GB lagu ballaarin karo MicroSD illaa 256 GB
Kaamirada gadaal Nidaamka Dual 20 MPX + 12 MPX oo leh 2.2 furfurnaan ficil / autofocus / xasilinta muuqaalka indhaha / wajiga ogaanshaha / panorama / HDR / laba-midab LED flash / Geolocation / Duubista fiidiyowga ee tayada 4K
Kaameradda hore 8 MPX oo leh aagga fure 1.9 / video kujira 1080p
Xuduudaha kala duwan DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Qeybaha 3G (HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100) 4G band band 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 4 (1700/2100) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 9 (1800) / 12 (700) / 17 (700) / 18 (800) / 19 (800) / 20 (800) / 26 (850) / 28 (700) / 29 (700) / 38 (2600) / 39 (1900) / 40 (2300) / 41 (2500)
Tilmaamo kale shidma faraha / Accelerometer / metallic dhameystirka
Batariga 4000 mAh aan laga saari karin
Cabbirada X x 156.9 78.9 7.9 mm
Peso Gram 190
Qiimaha 699 euros
Sidii laga filayey koox ka mid ah astaamahan, Huawei Mate 9 wuxuu leeyahay qaabeyn xoog leh oo qalab dhisid ah. Huawei wuxuu sii wadaa inuu sharad ku sameeyo xalalkiisa si uu naf ugu siiyo seefteeda ugu horreysa iyo processor-ka HiSilicon Kirin 960 eWaa SoC-da ugu awoodda badan ee shirkaddu abuurtay maanta.
Waxaan ka hadlayaa octa core CPU oo ka kooban afar Cortex A73 cores oo gaara xawaare saacad ah 2.4 GHz, marka lagu daro afar kale oo Cortes A53 ah 1.8 GHz. Tan waa inaan ku darnaa a i6 soo-saare taas oo mas'uul ka ah xakamaynta dareemayaasha kala duwan ee qalabka, xitaa haddii ay ku jirto ganaax.
Mashiinka processor-ka ah ee dammaanad-qaadka ah ee lehna awood aad uga sarreysa waxa isticmaale kasta u baahan doono markaa dhinacaas uma baahnid inaad walwasho. Laga soo bilaabo Huawei waxay u maleynayaan in Kirin 960 waa 15% ka awood badan yahay 18% ayaa ka waxtar badan qaababkii hore Iyo, ka dib markii aan tijaabiyey muddo bil ah, waxaan kuu xaqiijinayaa inay sidan tahay: terminaalku wuxuu u dhaqaajiyaa wax kasta oo aan ku aragno shaashaddiisa xawaare sare, iyadoo aan la arkin tilmaam daahitaan ama joogsi.
Haddii Huawei uusan sharad ku dhigin processor-yada ka socda MediaTek, Qualcomm ama Samsung si ay u sameeyaan tiirarkeeda ugu wanaagsan ee garaaca, waa sabab aad u fudud: uma baahna iyaga. Soo-saaruhu wuxuu ku guuleystey inuu ku guuleysto tayo xagga soo-saarka processor-ka oo aan waxba ka masayrin tartamayaasheeda.
Oo hadaan xisaabta ku dareyno awoodaas waxba uma dhimayso ismaamulka oo ka mid ah Huawei Mate 9 taas, sida aad gadaal ka arki doontid, weli waa mid ka mid ah awooda taleefanka ee noqonaya iibiyaha ugu fiican.
Ka sokow, isaga Mali G71 MP8 GPU oo ay weheliso 4 GB oo RAM ah Bixiyaan boodbood tayo leh oo ku saabsan qaybta sawirada, oo bixiya waxqabad aad u fiican oo leh ciyaaraha ugu baahida badan. Iyadoo la tixgelinayo sida ay ula jaanqaadi karto Vulkan, waxaa iska cad in, haddii aad rabto inaad ku raaxeysato kulamada ugu fiican, Huawei Mate 9 uu yahay murashaxa ugu habboon. Inbadan haddii aan tixgelinno shaashadeeda 5.9-inji.
Shaashad Full HD ah oo ku ifaysa nalkeeda
Huawei Mate 9 wuxuu leeyahay shaashad ka kooban a 5.9-inch IPS panel, oo lagu daray muraayad 2.5D taas oo ka difaacaysa kuuskuusyada iyo dhicitaanka. Shaashadda si aad u wanaagsan ayaa loo miisaamay, iyadoo la siinayo cod buuxa iyo midabbo hufan oo fiiqan, in kasta oo ay ku mahadsan tahay isdhexgalka softiweerka ah ee wanaagsan waxaan ku hagaajin karnaa heerkulka midabka midda aan jecelnahay
ka xaglaha fiirintu way fiican yihiin oo xakamaynta dhalaalka ayaa fiican. Terminal-ku wuxuu u beddelaa dhalaalka shaashadda waqtiga dhabta ah iyadoo loo eegayo nalka hareeraha si habsami leh, marka lagu daro lahaanshaha habka ilaalinta indhaha oo ku habboon akhrinta waxyaabaha saacadaha badan iyada oo aan indhaha laga daalin.
In kasta oo ay run tahay in aan jeclaan lahaa Huawei Mate 9 in lagu dhejiyo guddi 2K ah, waan tixgelinayaa taas soo saaraha gabi ahaanba waa sax by sharad on xal hoose si ay u sii wadaan bixinta a madax-bannaanida run ahaantii cajiib ah.
Waxaan awooday inaan tijaabiyo terminals-ka shaashadaha 2K iyo farqiga u dhexeeya heerka muuqaalka si dhib leh lama ogaan karo, marka laga reebo markaan aqrinayo qoraal fara badan, halkaas oo horumar yar laga dareemi karo, laakiin waxaan dhahayaa guddiga noocan ah ayaa faa'iido leh oo kaliya in la qaato Faa'iidada tiknoolajiyada VR iyo Ilaa iyo markii ugu horreysay ee kumbuyuutarrada '4K' loogu talagalay taleefannada gacanta ay yimaadaan, halkaas oo pixels ugu dambeyntii la baabi'in doono marka lagu raaxeysto waxyaabaha ku jira xaqiiqda dhabta ah, waxaan u maleynayaa in shaashadda Full HD ay ka badan tahay inta ku filan.
Akhristaha faraha ugu fiican suuqa
Dareemayaasha biometric-ka ee qalabka Huawei ayaa ugu fiican. Sida ugu fudud ee. Dhamaan taleefanada aan isku dayay, shaki la'aan waxaan doorbidaa xalalka soo saarahaan. Marka laga hadlayo Huawei Mate 9 waxaan heleynaa akhristaha faraha oo u shaqeeya sida soo jiidashada garashada raadkeenna xilligan xagal kasta ha ka jirtee.
Marka hore akhristaha wuxuu laqabsadaa astaanteena, markasta oo la hagaajiyo xawaaraha marka ay timaado aqoonsiga faraha, laakiin runtu waxay tahay in daqiiqada ugu horeysa ay si dhakhso leh u shaqeysay oo aanan dareemin horumar si fudud maxaa yeelay macquul maahan in la wanaajiyo awooda falcelintooda.
Si aan kuu siiyo fikirka, inta lagu guda jiro bishan inta badan markaan shaashadda hawl galiyo waxaan isticmaalay akhristaha sawirka faraha iyo Mar qudha igama dhicin. Shakhsi ahaan, runtii waan jeclahay halka ay ku taal dhabarka, in kastoo aan fahamsanahay in dadka isticmaala qaarkood ay doorbidi karaan in la dhigo dhinaca hore si ay u awoodaan inay furaan shaashadda taleefanka iyagoo miis ku tiirsan, laakiin waan la qabsaday inaan soo qaato fur oo waxaan u maleynayaa in booskiisa uu qumman yahay.
EMUI 5.0, oo ah is-dhexgal raaxo iyo iftiin leh oo aan hoos u dhigayn khibradda isticmaale
Ma jecli lakabyada caadada. Pure Android waa ikhtiyaarka ugu fiican ka dibna adeegsadayaashu waxay rakibi doonaan launcher haddii ay rabaan. Laakiin waa inaan sheegaa in noocyadii ugu dambeeyay ee EMUI ay aniga iyo aniga i jeclaadeen EMUI 5.0 Huawei waxay ku guuleysatay inay ku guuleysato tayo wanaagsan iyo khibrad isticmaale.
Si aad u bilowdo lakabka waa ku saleysan Android 7.0 Nougat, noocii ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka Google, waa wax la mahadiyo. Isbeddelada marka la barbardhigo noocyadii hore waa kuwo aad u xiiso badan maadaama, tusaale ahaan, aan dhaqaajin karno khaanad codsi ah, oo ah ikhtiyaar ku habboon kuwa isticmaala ee aan hadda la qabsan nidaamka ay ku shaqeeyaan desktop-ka.
Inta badan barnaamijyada iyo astaamaha waa seddex guji oo fog markaa waa wax aad u fudud oo raaxo leh in la aado qayb kasta oo ka mid ah terminaalka. Muuji maareynteeda shaqo badan, in yar oo taabanaysa badhanka u dhigma, waxaan ka heli doonnaa nidaam «kaararka» ah oo aan ku arki karno barnaamijyada aan furanno.
Sida moodooyinka hore, Huawei Mate 9 waxay leedahay ikhtiyaar ah ku samee dhaqdhaqaaqyo kala duwan farahaaga si aan u qaadno shaashadda shaashadda ama u dhaqaajino shaqada shaashadda kala-jaban taas oo noo oggolaan doonta inaan adeegsanno laba codsi isla mar keliya isla shaashadda.
Muuji kumbuyuutarkaas Swiftkey Waxay ku imaaneysaa heerka terminalka sidaa darteed qorista Huawei Mate 9 waa farxad dhab ah. Iyo muhiimad gaar ah oo ku saabsan habka "mataanaha codsiyada", muuqaal xiiso leh oo ah EMUI 5.0 taasina waxay noo ogolaaneysaa inaan adeegsano isla adeeg, sida WhatsApp ama Facebook, oo leh laba muuqaal. Waxay ku habboon tahay dadkaas leh lambar shaqsiyeed iyo xirfadle kale oo aan doonayn inay qaataan laba taleefan oo isku mar ah.
Xiriirka cusub ee Huawei wuxuu leeyahay a leedahay madal sirdoon macmal ah taas oo wax ka baranaysa adeegsiga qalabka, la qabsiga baahiyahayaga iyo inaan siino waxqabad wanaagsan.
Algorithms-yadaas, oo aan u baahnayn xiriir internet si ay u shaqeeyaan, waxay la jaan qaadayaan adeegsiga maalinlaha ah waxayna ka dhigayaan barnaamijyada aad isticmaasho had iyo jeer inay dhaqso u shaqeeyaan. Wax ku ool ah? Wax fikrad ah kama haysto, maadaama aanan dareemin waxqabad ku soo hagaagaya, laakiin maadaama waxqabadka markasta uu qumman yahay, waxaan u qaadan karaa in muuqaalkani runtii u qalmo.
Laakiin dhammaantood maahan war wanaagsan. Soosaarayaasha Shiinaha ayaa jecel inay rakibaan boobka nasiib darose Huawei sidaas ugama harin. Facebook, Booking ama liiska ciyaaraha ayaa horey loogu sii dhejiyay taleefanka, in kastoo badankood barnaamijyadan qashinka la tirtiri karo, waxaan dhibsadaa inay codsiyada yimaadaan oo aanan codsan. Laakiin waa wax aan u baranay, nasiib daro, soosaarayaasha badankood iyo uguyaraan kama dhimayso khibrada isticmaale ee EMUI 5.0
Batariga: Huawei Mate 9 ayaa mar labaad xaaqaysa tartamayaasheeda iyagoo siinaya waxqabad aan horay loo arag iyo ismaamul
La madax-bannaani Waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan marka la dooranayo terminaal leh shaashad ballaaran oo arrinta laynka 'Mate line' marwalba ka mid ahayd xooggiisa. Xaaladda Huawei Mate 9, waa inaan dhahaa taas soo saaraha waa la dhaafay.
Mate 9 wuxuu leeyahay a 4.000 mAh baytariga taas oo runtii ka faa'iideysaneysa ismaamulkeeda. Si aan fikrad kuu siiyo, adiga oo si caadi ah u isticmaalaya, saacaddiina Spotify-ka ah, internetka oo aad booqanayso, akhrinayso emaylka, adoo adeegsanaya shabakadaha bulshada si muxaafid ah una ciyaaraya nus saac, terminalku wuu ii samray laba maalmood. Maalintii labaad wuxuu durba guriga yimid 20:00 fiidnimo xoogaa wuu ku degdegay, laakiin bandhiggu waa mid cajiib ah.
Haddii aan ku riixno kamaraddaada si aan u qaadno sawirro iyo fiidiyowyo ama aan u ciyaarno ciyaaro baahi badan, batteriga ayaa si dhaqso leh u daadin doona, laakiin waxaan horeyba kuugu sheegayaa in isticmaalka caadiga ah suurtagal maaha in taleefanka uu hoos uga dhaco 40% hal maalin gudaheed.
Tan waa in lagu daraa habka ugu dhakhsaha badan ee amar bixinta ee ku yimaada heerka Huawei Mate 9 oo noo oggolaanaya inaan haysano 30% batteriga lagu soo oogay 50 daqiiqo. Maalmihii ugu horreeyay ee aan tijaabinayay taleefanka waxay qaadatay waqti dheeri ah, oo gaadhay 60% 50 daqiiqo gudahood, laakiin dhawr dacwadood oo wanaagsan ka dib waxaa caddaatay in Huawei uusan ka been sheegaynin arrintan, sidoo kale, xawaareynta degdegga ah runti way ka dhakhso badnayd sida ay sheegtay. soo saaraha, taas oo iga yaabisay.
Waa sidaas Waxaan ku gaadhay 55% lacag batteriga 30 daqiiqo Iyo, sidaan horay u soo sheegay, ismaamulkaas waxaa naloo ballan qaaday maalin buuxda oo la isticmaalo. Layaab maleh, xoojinta qarashka ayaa hoos udhacaya kolba waqtiga usocdo, laakiin 30 - 40ka daqiiqo ee uguhoreysa waa marka lacag bixinta sida ugu dhaqsaha badan.
Sida ku cad tijaabooyinkayga, kharashka buuxa wuxuu qaadanayaa wax ka yar laba saacadood, oo u dhexeysa saacad ilaa labaatan daqiiqo iyo saacad iyo afartan daqiiqo. Bateriga ugu dambeeya ee 15% ah ayaa ah midka ugu dheer qaadashada, laakiin waxaan horeyba kuugu sheegayaa xawaareheeda inuu yahay mid lala yaabo.
Un Nidaamka lacag-bixinta degdegga ah ee ka sarreysa heerka caanka ah ee loo yaqaan 'Qualcomm Quick Charge 2.0' ama MediaTek Pump Express oo aan awoodnay inaan ku tijaabino Nomu S20. Dabcan, waa inaad isticmaashaa xeedho la socota terminal-ka oo waxyar ka weydaaran xeedhooyinka ay Huawei inta badan ku bixiso qalabkeeda.
Waxaad dhahdaa Huawei Mate 9 ma laha lacag-ku-dillaac wireless, inkasta oo ay tahay wax aan ula qabsanay terminaal bixiya jidh ka samaysan aluminium waxa aan u arko xumaanta ka yar.
Ugu dambayntiina waxaan rabaa inaan faallo ka bixiyo faahfaahin aan ka helay. Waana taas Sanduuqa 'Mate 9' wuxuu ku yimaadaa micro USB-ga USB adabtarada nooca C, Faa'iido badan ayey u leedahay marka aad aado qof gurigiisa oo aysan haysan fiilo ku habboon taleefankaaga.
Kaamiro cadeyneysa laba nidaam waa habka loo maro
Qaybta kamaraddu waa mid ka mid ah qodobbada ugu caansan ee cusub ee Huawei Mate 9. Sii wadida sharadka a nidaamka muraayadaha laba-geesoodka ah wuxuu cadeeyaa ujeedka soo saaraha inuu xoojiyo isbahaysigiisa Leica. Natiijooyinka la gaadhayna runtii way fiicnaayeen.
Si aad u bilawdid, Mate 9 wuxuu leeyahay dareemayaal ugu horreeya oo leh xallinta 20 megapixels iyo aperture f 2.2 oo ururiya macluumaadka monochrome (madow iyo caddaan). Dhanka kale waxaan heleynaa dareeen labaad oo ah 12 megapixel kaas oo leh furfuris isku mid ah isla markaana soo qaada sawirada midabada.
Labada muraayadaha indhaha ayaa ah qaabka Leica Soo koobid - H 1: 2.2 / 27 in aan horeyba ugu aragnay Huawei P9 iyo P9 Plus. Natiijada isku-dhafkan ayaa ka dhigaysa sawirrada lagu qabtay midab ama madow iyo caddaan inay gaadhaan 20 megapixels. Xeeladdu waxay ku jirtaa farsamaynta muuqaalka maaddaama Mate 9 uu ku qaadanayo sawirrada midabbada leh iyo qaabka loo yaqaan 'monochrome' si loo kala dhexgalo midabada abuurista muuqaal dhab ah 20 megapixel.
Xoog saarid gaar ah oo aan caadi aheyn saamaynta bokeh taas waxaa lagu gaaraa Huawei Mate 9 taasna waxaa lagu dhaqaajiyaa cabbirka furitaanka dheer ee barnaamijka kamaradda taleefanka. Sawirada lagu soo qaaday qaabkani waa wax lala yaabo tan iyo markii, mar qabashada la sameeyo, waxaan ku kala duwanaan karnaa qoto dheerta goobta sawirka iyadoo ay ugu wacan tahay barnaamijkeeda wax soo saarka awood badan.
Iyo software ka wax badan ka caawisaa in arrintan la xiriira. Codsiga kamaradda Huawei Mate 9 wuxuu leeyahay miirayaal badan iyo qaabab taas oo ka farxin doonta dadka jecel sawir qaadista. Gaar ahaan qaabka loo yaqaan 'monochrome' si aad u qaadatid sawirro madow iyo caddaan ah oo cajiib ah. Mana iloobi karno qaabka xirfadeed ee kuu oggolaan doona inaad gacanta ku beddesho cabbirka kamaradaha kala duwan, sida diiradda ama dheelitirka cad, noqoshada aalad muhiim u ah khubarada ku sugan sawir qaadista. Haa, naso in aad awoodid ku keydi sawirada qaab RAW.
Muuji in isku darka labada dareemayaal waxay u oggolaaneysaa inay abuuraan isku dheelitir 2x ah iyo dhijitaal ah oo bixiya waxqabad la aqbali karo, iyada oo aan la gaarin heerka indha indheynta indhaha laakiin taasi, waxaan kuu ballan qaadayaa, inay kaa badbaadin doonto wax ka badan hal dhibaato.
Dheh xawaaraha diirada ee kamaradda Mate 9 runtii waa wanaagsan tahay, oo bixiya si dhakhso leh oo tayo leh. Marka dambe waxaan kaaga tagi doonaa sawirro taxane ah oo lala qaaday taleefanka si aad u aragto suurtagalnimadiisa.
ka midabada waxay umuuqdaan kuwo aad u fiiqan oo muuqda, gaar ahaan deegaanno leh nal wanaagsan, in kasta oo hab-dhaqankeeda sawirrada habeenkii ay iga yaabisay. Waxaan rabaa inaan carrabka ku adkeeyo in qabashada lagu sameeyay kamaradaha Mate 9 ay runta si dhab ah u aaminaan.
Waa maxay tan macnaheedu? Taasi ma arki doonno sawirro midab leh sida kuwa kale ee taleefannada sare ee sare leh ee HDR firfircoonaa sida ugu fiican ee ay u bixiyaan midabyo dhalaalaya. Shakhsiyan waan jeclahay ikhtiyaarkan inbadan, oo hadaan rabo inaan daweeyo sawirka waxaan isticmaali doonaa tirada badan ee miirayaasha la heli karo si aan u siiyo taabasho aad u xiiso badan oo ku saabsan qabashada.
Weli waxaan u maleynayaa in kamaradda Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge, ama kamaradda cajiibka leh ee LG G5, ay wali yihiin darajo sare, laakiin qabashada laga helay Huawei Mate 9 waa mid cajiib ah oo si dhakhso leh ama goor dambe soo-saaraha ayaa ku dambayn doona la-qabsiga tartamayaasheeda, ama xitaa iyaga ka sarreeya. Iyo xaqiiqda ah in lagu ciyaari karo saamaynta bokeh waxay siinaysaa dhibic aad u xiiso badan. Ma aha in la xuso xaqiiqda ah in aan ugu dambeyntii awoodi doonno inaan ku duubno qaab 4K ah 30 wareegsan halkii labaad.
La kamaradda hore, oo leh furitaan f / 1.9 Waxay leedahay waxqabad wanaagsan, udhaqmeysa si aad u wanaagsan waxayna siineysaa qabasho aad u wanaagsan oo ay ugu mahadcelineyso muraayadeeda 8 megapixel, noqoshada xulaf aan la dafiri karin kuwa jecel sawirada.
Gallery sawirro laga qaaday kamaraddii Huawei Mate 9
Qaabka caadiga ah
Gabagabadii ugu dambeysay
Huawei Waxay noqotay soo saaraha saddexaad ee ugu weyn adduunka iyada oo la tixgelinayo mudnaanteeda. Shirkadda weyn ee Aasiya ayaa ku guuleysatay inay ka saarto sawirkaas "sumcadda taleefanka ee Shiinaha oo raqiis ah" si ay kor ugu qaaddo halbeegga lagu soo bandhigayo xalalka aan waxba ka hinaasin magacyada waaweyn sida Samsung ama Apple.
Horeba isaga ula - Huawei P8 Lite, Iyadoo ay weheliso olole xayeysiis xayeysiis ah, soo-saaraha ayaa kula taliyay ujeedkiisa. Iyo kadib Huawei P9 iibiyaha ugu fiican, taas oo horey u dhaaftay 9 milyan oo unug oo la iibiyey, Huawei ayaa garaacaya miiska si ay kuu xusuusiso in halkan la joogo.
Kahor intaanan faallo ka bixin tan Huawei Mate 9 waa taleefanka ugu fiican ee ay samaysay shirkadda Huawei shaqadana waa mid aad u fiican. Qalab leh qiimo aad u sarreeya, oo leh astaamo ku ammaanaya qaybta sare, oo bixiya waxqabad aad u wanaagsan iyo astaamo, sida kamaraddiisa dambe ee laba-geesoodka ah ama madax-bannaanida ka soocda kuwa la tartamaya. qiimo ah 9 yuuro, taas oo, iyada oo la tixgelinayo astaamaheeda, ay ila muuqato inay macquul igu tahay.
Waxaa jira boqor cusub oo ku jira suuqa xayeysiinta ka dib dhicitaankii Galaxy Note 7. Ma aqaano haddii qoyska Note-ka ay ku soo laaban doonaan suuqa, waxaan rajeynayaa waana hubaa in soo saaraha Kuuriya uusan si fudud ku daali doonin, laakiin waxay leedahay tartan aad u adag, sababtoo ah haddii tan Huawei Mate 9 Waxay dhadhamisay macaan badan afkayga, waan hubaa inay tani bilow tahay oo ah dagaal xiisa leh oo loo caleemo saarayo milkiilaha suuqa xarafka oo si weyn uga faa'iideysan doona isticmaalaha dhamaadka
Dib u eegida: Alfonso ee Miraha
64GB awood la ballaarin karo
Ismaamul aan horay loo arag
Qiimo aad u xiiso badan oo lacag ah iyadoo la tixgelinayo faa'iidooyinkeeda
Malaha FM Radio
Uma adkaysato boodhka iyo biyaha
Sawirka muuqaalka ee Huawei Mate 9
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei Mate 9, kani waa boqorka cusub ee suuqa phablet
SwiftKey waxay ku dhigeysaa dhammaan mawduucyada lacag-la’aan ah bilaash
Nokia D1C wuxuu imaan lahaa sanadka dambe labo nooc